ဦးနှောက် ကျန်းမာစေဖို့ ဉာဏ်စမ်းဖြေရမလား။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမလား..... - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » ဦးနှောက် ကျန်းမာစေဖို့ ဉာဏ်စမ်းဖြေရမလား။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမလား…..
ကဲ…. ဦးနှောက် ကျန်းမာစေဖို့ ဘာလုပ်မလဲ….. ဉာဏ်စမ်း ဂိမ်းတွေဆော့မလား…. လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မလား… ကြိုက်ရာရွေးပါ။ ဘယ်အသက်အရွယ်ရောက်ရောက် မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရတွေကို မှတ်မိနေချင်တယ်ဟုတ်။ ဒါဆိုရင်တော့ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အဖြေလေးကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့က စာများများဖတ်ရမယ်။ ပဟေဠိတွေ ဖြေရမယ်။ ဉာဏ်စမ်းဂိမ်းတွေ ဆော့ရမယ်လို့လေ။ ဒါတွေကတကယ်ပဲ ဉာဏ်ကောင်းစေလားဆိုတော့ စာဖတ်တာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ မသိသေးတာတွေကို သိအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းက ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ကိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်စမ်းဂိမ်းတွေဆော့တာထက်တော့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်ကိုပိုကျန်းမာစေပြီး မှတ်ဉာဏ်ကို ပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြောတာက အထောက်အထားရှိလို့လားလို့ မေးချင်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဉာဏ်စမ်းဂိမ်းတွေဆော့ရတာက စဉ်းစားရတာကြောင့် စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကို တိုးစေနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်ဆီ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေတာကြောင့် ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဦးနှောက်ကို ကျန်းမာစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့စေတဲ့ endrophin ဟော်မုန်းတွေကို ထွက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်ကျန်းမာစေဖို့အတွက် ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာက အဆင်ပြေစေမှာပါ။ လေ့လာမှုတွေအရလည်း ဉာဏ်စမ်းဂိမ်းတွေဖြေတာထက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်ကို ပိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဦးနှောက်ကျန်းမာစေဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုက ဦးနှောက်ဆီသွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု ကောင်းစေဖို့ပါ။ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းမွန်စေဖို့ဆိုရင် နှလုံးကျန်းမာဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့။ နှလုံးကျန်းမာမှ သွေးကြောတွေဆီသွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေပြီး ဦးနှောက်ဆီကိုလည်း သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေမှာပါ။
တကယ်လို့ သွေးတိုးရောဂါရှိနေမယ်။ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောတွေများနေမယ်ဆိုရင် သွေးကြောကျဉ်းတာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုခဲ့ရင် သွေးကြောတွေဆီ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုနည်းသွားပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်လေးကျန်းမာရေးစေဖို့အရေးပါတဲ့ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု ကောင်းစေဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကိုလိုက်နာပေးဖို့လိုပါမယ်။
ဦးနှောက်ကျန်းမာစေဖို့ မွေးမြူပေးသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်အချို့က ဘာတွေများလဲ……
ကဲ….. ဦးနှောက်ကျန်းမာပြီး ပျော်စရာအမှတ်တရလေးတွေကို မှတ်မိစေဖို့အတွက် နေ့စဉ်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စို့နော်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုရော ဦးနှောက်ကို ပါကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇန်နဝါရီ 3, 2020 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 9, 2020
How to Keep Your Brain Fit https://www.webmd.com/brain/features/keeping-your-brain-fit-for-life# Accessed Date3January 2020
5 Brain Exercises to Strengthen Your Mind https://www.verywellmind.com/brain-exercises-to-strengthen-your-mind-2795039 Accessed Date3January 2020
7 ways to keep your memory sharp at any age https://www.health.harvard.edu/healthbeat/7-ways-to-keep-your-memory-sharp-at-any-age Accessed Date3January 2020